Tafakatra 31 ireo maty tamin’ilay fanafihan-dahalo : miaramila sy zandary 50 lahy nalefa any Beroroha | NewsMada
Tafakatra 31 ireo maty tamin’ilay fanafihan-dahalo : miaramila sy zandary 50 lahy nalefa any Beroroha
Araka ny tarehimarika farany, tafakatra 31 ireo namoy ny ainy, vokatr’ilay fanafihan-dahalo nahery vaika noho ny fanafihan’ny dahalo ny taksiborosy nitondra azy ireo. Omaly ihany, nandefasana miaramila sy zandary 50 lahy any Beroroha hikaroka sy hisambotra ireo nahavanoa izao helokabevava izao.
Tafakatra 31 ny isan’ny maty tamin’ilay fanafihan-dahalo tany Berenty Beroroha, raha ny fanazavan’ny zandarimaria omaly. Olon-dehibe ny 21 amin’ireo, 10 ny ankizy ary 17 naratra mafy. Anisan’ny maty tamin’ity fanafihana ity ny zandary mpiana-draharaha iray sy ny vadiny.
Nandefa miaramila sy zandary 50 lahy avy hatrany teo anivon’ny fibaikona ny azy ireo, omaly ihany. Voalaza fa efa any an-toerana ireo hatramin’ny omaly, ary efa manao ny fanarahan-dia ireo dahalo.
Araka ny fanazavan’ny kaomadin’ny zandarimaria, ny Jly Ramiandrisoa Jean de Dieu Daniel, tsy nisy ny tifitra variraraka nataon’ny dahalo fa ilay mpamily no nokendren’izy ireo.
“Voatifitra ny mpamily kanefa niezaka nitondra ny fiara niala ny sakana teo amin’ny arabe. Notifirin’ny dahalo ny kodiaran’ny fiara ka izay no nampivadibadika ilay kamiao taksiborosy. Io fivadihana io nahafaty ireo olona marobe”, hoy ny kaomandin’ny zandarimaria. Efa nalefa any Ankazoabo avokoa ny razana rehetra ho an’ireo niharam-boina.
Manodidina ny 7 tapitrisa Ar eo ny vola voaroba ankoatra ny entana. Ny 3 tapitrisa Ar tamin’ireo an’ny Secaline.
Miaramila roa kosa naratra tamin’ilay fiara 4×4 -n’ny miaramila ho any Beroroha. Lietna ny iray tamin’ireo, izay voatora-bato tamin’ny lohany. Adzida kosa no voatifitra ary nalefa notsaboina any Toliara. “Tsy nisy natahorana ny momba ireo miaramila notafihan’ny dahalo ireo”, hoy ny fanamafisana.
Hiatrika dahalo 70
Araka izany, mety hifandona amin’ireo dahalo 70 lahy, araka ny filazan’ny depiote avy any Beroroha ireo miaramila sy zandary 50 lahy nalefa any an-toerana ireo. “Azo heverina fa ireo nanafika ireo miaramila ihany no nanafika ilay taksiborosy. Tsy fantatra mazava aloha ny tena isany, fa efa any an-toerana ny miaramila”, hoy ny jly Rakotoarison Anthony.
Anisan’ny olana amin’ny ady amin’ny asan-dahalo any Atsimo ny tsy fahampian’ny fitaovana eo amin’ireo mpitandro filaminana. Efa any amin’iny faritra iny anefa ny hery manokana miady amin’ny dahalo, ary vao ny herinandro teo no notokonana izany tany Betroka, nambara fa mahazaka miaramila hatramin’ny 200 mahery.
Ny isan’ireo dahalo andanin’izany miovaova eo ary efa mihantsy ireo mpitandro filaminana mihitsy, porofon’izany ity fanafihana tany Berenty ity. Raha tsy komando kosa aloha ireo 50 lahy nalefa any Beroroha, mety hosahirana ihany eo anatrehan’ireo 70 lahy, indrindra fa mahay ny toerana anaovany ny asa ratsiny izy ireo. Andrasana izay vokatry ny hetsika ataon’ny mpitandro filaminana. Tsy tokony ho vitavita ho azy izao nahafatesana ain’olona maro izao, tompon’andraikitra ny fanjakana.
Mercredi ! École buissonnière 15/07/2020
Les photos du 15 Juillet 2020 15/07/2020